Yini i-sleet futhi yakhiwa kanjani? Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngokuya ngezimo zomkhathi ezikhona ngaso sonke isikhathi, asikwazi njalo ukuthola uhlobo ngqo lwemvula. Okungukuthi, ngeke ihlale ine imvula, iqhwa noma isichotho, kepha kukhona ne imvula. Kungumkhuba wemvelo lapho kukhona khona imvula enesimo semvula futhi nieve. Ukuze lokhu kwenzeke, kufanele kuhlangatshezwane nezimo ezithile zemvelo kanye nomoya osemkhathini. Ngaphezu kwalokho, lolu hlobo lwesimo sezulu futhi lubangela ukuthuthuka okufana ne-sleet.
Sizokucacisa konke lokhu nge-sleet ne-sleet kulokhu okuthunyelwe.
1 Yini i-sleet futhi kwenzeka nini?
2 Izici ze-Sleet
3 Yini isleet
Yini i-sleet futhi kwenzeka nini?
Kunezikhathi lapho izimo zemvelo ziyahlukahluka. Njengoba sazi, okuhlukile kwesimo sezulu yilokho okulawula izimo zemvelo ngaso sonke isikhathi. Kuya ngamanani we ingcindezi yasemkhathini, izinga lokushisa, umbuso womoya, amafu, umswakama, njll. Kungaba nohlobo oluthile lwemvula noma olunye. Into ejwayelekile kakhulu ukuthi uma amazinga okushisa engaphezulu kuka-0 degrees nomswakama uphakeme, imvula iba ngesimo semvula.
Ngakolunye uhlangothi, uma amazinga okushisa engaphansi kuka-0 degrees noma sisekuphakameni okuphezulu, lapho ingcindezi iphansi, kuvame kakhulu noma kungenzeka ukuthi imvula yenzeka ngesimo seqhwa. Kodwa-ke, lezi zimo zemvelo ezivame ukwedlula zonke akudingeki ukuthi zibe "ngubaba wethu" wemeteorology, kepha kukhona okuhlukile njenge-sleet.
I-Sleet uhlobo lwemvula lapho imvula neqhwa kwenzeka ngasikhathi sinye. Ingxenye yemvula iqandisiwe kanti amanye enza amaconsi amanzi noma amakristalu amancane eqhwa. Ukuze kukhiqizwe amanzi eqhwa kufanele kube nezimo ezithile ngqo zemvelo. Futhi kwenzeka kuphela uma umoya ufudumele ngokwanele ukuqala ukuncibilika iqhwa, kepha ngaphandle kokulincibilikisa ngokuphelele. Lolu hlobo lomoya nalo luxhomeke ekuphakameni, kuswakeme nasembusweni womoya. I-Sleet ayinakwenzeka ngaso sonke isikhathi noma ngabe izinga lokushisa lomoya lilungile ukuze amanzi aqale ukuncibilika kepha angancibiliki ngokuphelele.
Amakristalu e-ice abizwa ngokuthi ama-flakes angama-hexagonal shape uma ebhekwa eduze.
I-Sleet ayivamile ukuqina phansi, kepha iba nokubukeka njengoba yehla ivela emafwini. Ngokuvamile, uma amazinga okushisa angaphansi kwama-degree angama-zero, i-flake ngokwayo ingase iqine futhi yakhe i-crystal ice lapho iwela phezulu. Ngokwesinye isandla, Ukubanda kwamakhaza la emhlabathini kungakha lokho esikwaziyo njengamacwecwe eqhwa noma isithwathwa.
Kwabanye ababikezeli bezulu, i-sleet iyindlela yemvula lapho amanzi afriziwe ngokwengxenye, kepha akudingeki abunjwe ngekristalu. Okusho ukuthi, awudingi iphethini ejwayelekile ye-hexagonal kulolu hlobo lwemvula.
Iqhwa elenzeka kulolu hlobo lwemvula yinhle kakhulu futhi ayizakhi izakhiwo eziyinkimbinkimbi kangako. Lesi sakhiwo esihle senzeka lapho amazinga okushisa efudumele ngokwanele ukuba ancibilikise iqhwa, kodwa ngaphandle kokuliguqula libe ngamanzi. Ngenxa yalesi sizathu, phakathi noswidi, singabona amaconsi amanzi ecishe ancibilike abe yiqhwa ngaphandle kokwenza ikristalu namanye amakhekheba eqhwa okuthi, ngokuba mkhulu ngosayizi, angancibiliki ngesikhathi futhi agcine ukwakheka kwawo okuyinhloko.
Mhlawumbe lapho ubuka kubukeka njengohlobo olujwayelekile lweqhwa, kepha uma ibhekwa eduze noma ngaphansi kwesibonakhulu, kungabonakala ukuthi izinhlamvu ezifana nezesichotho ziyakhiwa esikhundleni samakristalu eqhwa agcwele anesakhiwo esiyizikwele. Kulokhu zingamaqhwa amancane amorphous.
Umehluko phakathi kwale mvula ubonwa kakhulu ekwakhiweni. Amaconsi amanzi aqukethe ukwakheka, isichotho sinamanzi esimweni esiqinile, futhi amanzi eqhwa adlala ngeqhwa le-amorphous namakhekheba eqhwa.
Amanzi eqhwa anganikezwa ngezimo ezihlukile. Kungenzeka ukuthi ezinye izinto eziguquguqukayo zesimo sezulu ezifana nomswakama, ingcindezi yasemkhathini, ngakho-ke, umbuso womoya ubangela i-sleet engaba nokuthula okukhulu ukuguqula kube yi-sleet. I-Sleet ayilutho ngaphandle kwesiphepho esinemvula.
Kungumkhuba wemvelo lapho singabona khona isivunguvungu samanzi nesithwathwa esihle kakhulu ngezakhiwo futhi sishiye indawo yaso ngokuqinile futhi sisekude ngamandla omoya. Ukuze i-sleet yenzeke, umswakama ohlobene kufanele ube cishe u-100% futhi umoya kufanele ube ngaphansi kwama-zero degrees. Kulokhu, isici esenza amakhekheba eqhwa ancibilike abe yiqhwa lama-amorphous umoya nokwehla kwengcindezi yasemkhathini. Imvamisa, lo mkhuba ubonakala uhambisana nesiyaluyalu.
Imvamisa kwenzeka ezindaweni eziphakeme zezintaba, lapho umfutho womoya uphansi njengoba utholakala uphakeme futhi nomswakama ungagcinwa uphakeme ngenxa yobuningi bezihlahla. Kuya futhi ngohlaza kanye nohlobo lwalo. Uma ukuminyana kwe-shrubby kungakwazi ukugcina umswakama uphakeme. Ukuze la manani omswakama avele, kudingeka umswakama ophakeme, owakhiwa ikakhulukazi izindawo ezinamahlathi ezinobukhulu nokuphakama okukhulu.
Ngokwengezwa komswakama, isivunguvungu nengcindezi ephansi phezulu, kuzoba nemimoya enamandla ngokwanele ukudala isiphepho lapho i-flakes ye-amorphous ice icibilika. Lesi simo senzeka ekwindla nasebusika nasentwasahlobo. Kuvame kakhulu entwasahlobo lapho kuneqhwa elithile futhi ubukhulu behlathi buphakeme ngenxa yesikhathi sokuqhakaza nokukhula kwezitshalo eziningi.
Njengoba ukwazi ukubona, emvelweni akukho mkhuba omakwe ngokuphelele futhi wasungulwa ngezimpawu ezihlukile. Yithina esihlukanisa lezi zenzakalo ukuze siziqonde kangcono.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Sleet